Vaovao - fironana silhouette ny fanatanjahan-tena ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy
Ny 2022 tany am-piandohan'ny fararano dia nitaona ny fitaovam-panatanjahan-tena ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy, ary hanisy fiheverana bebe kokoa ny fomba lamaody ary azo hanaovana matetika; aingam-panahy avy amin'ny akanjo akanjo fanatanjahan-tena tamin'ny fampisehoana vanim-potoana vaovao 2021, mandalina lalindalina kokoa amin'ny andiam-panatanjahantena lamaody Silhouette of suit. Ny akanjo fitehirizana mifangaro dia azo atao matetika. Ny famolavolana azo esorina sy ny akanjo manasaraka lamaody dia mampitombo ny fahatsapan'ny mpanjifa fahafaha-mandanjalanja nefa mando kokoa; ny famirapiratan'ny volory sy ny volony dia manolotra firafitra ambany-lafo amin'ny fanatanjahan-tena lamaody. Ny akanjo an-trano mampahazo aina dia manome antoka ny fampiononana amin'ny alàlan'ny fanolorana endrika amina antsipirihany sy fanovana ny mombamomba azy mifanaraka amin'ny filàna sy ny maha-azo ampiharina amin'ny fanaovana sehatra maro; ny fivoaran'ny akanjo Retro dia maro karazana sy mavitrika kokoa amin'ny mombamomba azy, mitondra bebe kokoa amin'ny Retro tamin'ny aingam-panahy Design 90s.
Ny karazan'akanjo fanatanjahan-tena lamaody rehetra dia nodiovina tamin'ny fampisehoana farany tamin'ny fararano sy ririnina 2021. Misy karazana fanatanjahan-tena isan-karazany toy ny fomba teknolojia futuristic, fomba fiasa mahafinaritra, fironana an-dalambe ary lamaody Retro; etsy ambany, dia hanao lisitra karazana fanatanjahan-tena maromaro amin'ny antsipiriany mifototra amin'ny silhouette izahay. Ny famakafakana lalina ny akanjo dia hanome aingam-panahy ho an'ny mpamorona hamolavola akanjo fanatanjahan-tena lamaody 2022 alohan'ny fararano.
Ny zaitra sy ny akanjo vita amin'ny sosona dia fomba vaovao amin'ny fiandohan'ny fararanon'ny 2022, izay ampiasaina amin'ny akanjo fanatanjahan-tena lamaody hanampiana fanasongadinana; aorian'ny fitobiana an-trano dia azonao atao ny mametraka mivantana T-shirt na palitao fohy amin'ny akanjo fanatanjahan-tena mba hisorohana ny fahafaham-baraka noho ny fitanjahana loatra Mandritra izany fotoana izany dia mampitombo ny estetika ary mahatratra ny maha-azo ampiharina ny fifanakalozana eo anelanelan'ny sehatra marobe amin'ny akanjo iray. Ity karazana palitao ity dia mila fifantohana amin'ny fiandohan'ny fararanon'ny 2022.
Ny fomba famolavolana azo esorina dia fomba vaovao ihany amin'ny fiandohan'ny fararanon'ny 2022. Izy io dia malefaka sy azo esorina eo ambany fifehezan'ireo mpanjifa, izay mahatonga ny fifehezana ny mari-pana, ny fifehezana ny hatsarana ary ny fampitomboana ny fampiharana ny vokatra tokana; toy ny fanombohana farany ny Adidas amin'ny vanim-potoana vaovao 2021 sy ny diva amerikana. Ny modely manify ao amin'ny andiany mitambatra dia manana zaitra mihombo sy tsy azo esorina amin'ny andilana sy ny sisiny, izay afaka manitsy ny halavan'ny midina ary na ny zorony misaraka aza dia azo ampiasaina ho toy ny akanjo lava, mahatsapa ny mety hisian'ny endrika maro amin'ny akanjo iray ; Ao amin'ny tranom-borona, ny fitsaboana azo esorina amin'ny tongotra kitroka dia mety hahatratra ny fiaraha-miaina ny hatsarana sy ny hatsaran-tarehy haingon-trano.
Ny teknika fizarazarana dia voatonona imbetsaka amin'ny akanjo vonona sy akanjo. Amin'ity vanim-potoana ity, ny fifantohana dia ny teknikan'ny fizarazaran'ilay akanjo miloko iray ihany; ny manasaraka ny lamba landihazo somary mihoapampana na haingon-trano miendrika baolina amin'ny sisin-tanany amin'ny tanany. Faharoa, ny zaitra misy loko mamirapiratra azo ovaina dia natao amin'ny vatan'ny pataloha mba hampitombo ny fahalianan'ny mpanjifa milalao. Mandritra izany fotoana izany dia azo atao ny manao loko mamirapiratra amin'ny harato anatiny mba hanatsarana ny fahatsaran'ny haingo.
Ny lamba volon'ondry dia mamirapiratra kely, izay mitondra haitraitra maivana amin'ny akanjo ankapobeny. Miaraka amin'ny silhouette an'ny akanjo fanatanjahan-tena, dia manatsara ny hatsaran'ny lamaody amin'ny fiantohana ny fampiononana ara-panatanjahantena; faharoa, ny lamba zipo sy ny lamba mamirapiratra corduroy lamba dia samy izy tany am-boalohany Safidy tsara eo ambanin'ny fomba.
Ny akanjo milamina amin'ny vanim-potoana vaovao dia mandinika bebe kokoa ny fivoaran'ny profil sy ny hakanton'ireo antsipirihany miorina amin'ny fiantohana ny fahombiazan'ny fampiononana. Ny famolavolana ny vozony mihoapampana, ny ravaky ny andilany ary ny tapaka ny ranjo ny pataloha dia samy mandika ny filan'ny hatsaran-tarehy ao an-trano amin'ny fiandohan'ny fararanon'ny 2022. Ny seta ambony sy ambany dia azo ampidirina hampitomboana ny fahatsapana fiasa ao an-trano.
Ny fahatsapana ny Retro dia misy toerana amin'ny seho fizaran-taona 2021 amin'ny fararano sy ririnina. Ny akanjon'ny fanatanjahan-tena amin'ny fiandohan'ny fararano 2022 dia mitongilana amin'ny fahatsapana ny fanamiana any an-tsekoly. Ny akanjo vaovao voaravaka haingo maitso ary vaovao dia manome fahatsapana mamelombelona sy mamiratra ho an'ny andiany; miaraka amin'izay koa, ny andian-dahatsoratra mena sy manga Retro Ny zaitra sy ny fampidirana ny webbing dia mahatsiaro ho toy ny efa 90 taona ny olona; ny palitao izay manambatra ny zipo antsasaky sy ny palitao notapahina dia nivoatra tanora kokoa sy lamaody amin'ny mombamomba azy.